စက်တင်ဘာလမွေးဖွားခြင်း။ နီလာ။ အပြာအရောင်။ အသစ် update ကို 2021
မွေးရပ်မြေ | ဇန္နဝါရီလ | ဖေဖေါ်ဝါရီလ | မတ်လ | ဧပြီလ | မေ | ဇွန်လ | ဇူလိုင်လ | သြဂုတ်လ | စက်တင်ဘာ | အောက်တိုဘာလ | နိုဝင်ဘာလ | ဒီဇင်ဘာလ
birthstone သည်စက်တင်ဘာလမွေးဖွားသည့်လနှင့်ဆက်စပ်သည့်ကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ နီလာ.
နီလာ ၎င်းသည်သံ၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ခရိုမီယမ်၊ ဗန်နာဒီယမ်စသည့်ဒြပ်စင်များပါဝင်သောအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်သောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာအမျိုးမျိုးသော corundum အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်.
ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည် ပြာသောဒါပေမယ့်သဘာဝပါပဲ နီလာ အဝါရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်များတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သဘာဝ နီလာ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာသို့ပွတ်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာအတွက်ဝတ်ဆင်နေကြသည်။
ပြာသော နီလာ ၎င်း၏အဓိကအမျိုးမျိုးသောအရောအနှောများတွင်တည်ရှိသည် ပြာသော နှင့်အလယ်တန်းအရောင်များ, အမျိုးမျိုးသော tonal အဆင့်ဆင့်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်မှာ
နီလာ Alluvial သိုက်များမှသို့မဟုတ်မူလမြေအောက်လုပ်ငန်းခွင်များမှတူးဖော်ရရှိသည်။ နီလာ၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်းထွက်ရှိသောတွင်းထွက်လုပ်ငန်းများတွင်အောက်ပါနိုင်ငံများပါဝင်သည်။ သို့သော်အာဖဂန်နစ္စတန်၊ သြစတြေးလျ၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ ကိုလံဘီယာ၊ အိန္ဒိယ၊ ကင်ညာ၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ အမေရိကန်နှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများ
နီလာ ကွဲပြားခြားနားသောပထဝီဝင်အနေအထားများမှကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္orာန်များသို့မဟုတ်ဓာတု - အညစ်အကြေးများပါဝင်မှုနှင့်ကွဲပြားသောဏုပါဝင်မှုအမျိုးအစားများပါဝင်လေ့ရှိသည်။
ကျနော်တို့ရောင်းချ နီလာ လက်စွပ်, လက်ကောက်, ပုတီး, လည်ဆွဲ & ပိုပြီး။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စက်တင်ဘာ၏မွေးရာပါကျောက်မျက်ရတနာ Sapphire ကိုစဉ်းစားသောအခါသမုဒ္ဒရာ၏နက်ရှိုင်းသောတော်ဝင်ပြာရောင်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။
စက်တင်ဘာမွေးဖွားသောကျောက်တံတားဖြစ်သောနီလာသည်အဆိုးရွားဆုံးနှင့်အဆိပ်သင့်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ နီလာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိုးထဲသို့ထည့်လျှင်အဆိပ်ပြင်းသောမြွေသည်သေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဘုရင်များအကြိုက်ဆုံးကျောက်တုံးသည်နီလာသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုပုံဆောင်သည်။
အပျိုကညာနှင့် Libra ကျောက်တုံးများသည်နှစ် ဦး စလုံးသည်ပbirthိသန္ဓေတည်ထားသည့်ကျောက်တုံးဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင် Virgo နှင့် Libra ဖြစ်ကြသည်။ နီလာ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိကျောက်တုံးကြီးဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာလ 1 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ2Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ3Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ4Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ5Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ6Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ7Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 8 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ9Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 10 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 11 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 12 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 13 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 14 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 15 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 16 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 17 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 18 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 19 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 20 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 21 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 22 Virgo နီလာ
စက်တင်ဘာလ 23 Libra နီလာ
စက်တင်ဘာလ 24 Libra နီလာ
စက်တင်ဘာလ 25 Libra နီလာ
စက်တင်ဘာလ 26 Libra နီလာ
စက်တင်ဘာလ 27 Libra နီလာ
စက်တင်ဘာလ 28 Libra နီလာ
စက်တင်ဘာလ 29 Libra နီလာ
စက်တင်ဘာလ 30 Libra နီလာ
အပြာရောင်နီလာ 2.59 CT
အပြာရောင်နီလာ 2.52 CT
အပြာရောင်နီလာ 1.51 CT
အပြာရောင် Sapphire 1.50 CT
အပြာရောင်နီလာ 2.11 CT
အပြာရောင်နီလာ 1.62 CT
အပြာရောင်နီလာ 1.56 CT
အပြာရောင်နီလာ 20K ရွှေနားကပ်